Radio NUG for Myanmar Spring Revolution
NUG Press Updates
About Radio NUG
News Feeder to Team
နွေဦး စစ်သည် ရေဒီယို အင်န်ယူဂျီ
Radio NUG ၏ နေ့စဉ် အသံထုတ်လွှင့်မှုလုပ်ငန်းများတွင် တစ်ဖက်တစ်လှမ်းမှ ပါဝင်ကူညီလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် မိဘပြည်သူများအား ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
Radio NUG ၏ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများနှင့် လိုအပ်သော ​ငွေကြေးများ ထောက်ပံ့နိုင်ရန် Zelle, Paypal တို့မှ DonateRadioNUG@MoCITMyanmar.org သို့ လည်းကောင်း
Youtube Channel မှ Video များကိုနားဆင်ပေးခြင်းအားဖြင့် ရရှိလာမည် Video View များမှ ရရှိသော ကြော်ငြာ​ငွေများဖြင့်လည်းပါဝင် ကူညီ ထောက်ပံ့နိုင်ပါသည်။
တတတ်တအား ပါဝင်လိုသော မိဘပြည်သူများနှင့် တော်လှန်သော သောတရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့ကူညီနိုင်သော အပိုင်းများမှ ဝင်ရောက် ကူညီနိုင်ပါရန် Radio NUG အဖွဲ့သားများမှ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါသည်။
၁။ သတင်းနှင့် ဆောင်းပါးများ ပေးပို့ခြင်း။
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးနှင့် ကမ္ဘာတစ်လွှားက နားဆင်နေကြတဲ့ ပရိတ်သတ်များထဲက မိမိအားသန်ရာ ကိုယ်ပိုင်ဆောင်းပါး၊ ကဗျာ ၊ သရော်စာ များကို စာမူများ အနေနဲ့သော်လည်းကောင်း အသံဖြင့် ရွတ်ဖတ်၍သော်လည်းကောင်း
မှန်ကန်သော မြေပြင်သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး Radio NUG ၏ သတင်းနှင့် အစီအစဉ်တာဝန်ခံများမှ ပေးပို့လာသော သတင်းနှင့် ဆောင်းပါးများကို စီစစ် တည်းဖြတ်ပြီး အသံထွက် ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
၂။ တော်လှန်ရေး တေးသီချင်းများ ပေးပို့ခြင်း။
နွေဦးတော်လှန်ရေး၏ အားကောင်းသောကဏ္ဍများထဲတွင် တေးသီချင်းများနှင့် ကဗျာများလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ အနုပညာအားကောင်းသော တော်လှန်ရေး တေးသီချင်းများစွာ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိရာ အများစုမှာ ရေဒီယိုတွင် ထုတ်လွှင့်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ တော်လှန်သော အနုပညာရှင် ဂီတပညာရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ တေးသီချင်းနှင့် ကဗျာများကို အောက်ပါ လင့်မှတဆင့် Google form ကို ရယူပြီး ပေးပို့ရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၃။ ရေဒီယို ဖမ်းယူရရှိမှု သတင်းပေးပို့ခြင်း။
မြန်မာပြည်နှင့် ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ ရေဒီယိုဝါသနာရှင်များနှင့်နားသောတရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့ အရပ်ဒေသအလိုက် Radio NUG ၏ လှိုင်းတိုမီတာ ဖမ်းယူရရှိမှုအခြေအနေများအားအောက်ပါ လင့်မှ တဆင့် Google form ရယူပြီး သတင်းပေးပို့နိုင်ပါသည်။
The voice of Myanmar Spring Revolution and National Unity Government of Myanmar
Broadcasting Shortwave Radio daily 8:30 AM on 17.79 Mhz & 8:30 PM on 11.94 MHz
Also available online @ Facebook, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn Radio
Radio NUG - The Voice of Myanmar Spring Revolution & National Unity Government of Myanmar.
Founded in August 24th 2021 , under the guidance of National Unity Government’s Ministry of Communications, Information & Technology.
Broadcasting Shortwave Radio daily 8 AM on 17.71 MHz & 8 PM on 11.965 MHz.
www.RadioNUG.org email - admin@RadioNUG.org and admin.RadioNUG@MoCITMyanmar.org
Run & Operated with Community Support, Volunteers & Donations, Pease donate - DonateRadioNUG@MoCITMyanmar.org
General Information Contact & QSL card - RadioNUG@MoCITMyanmar.org